China PVC camera ezinamacala wire ifektri kanye nabaphakeli | XINTELI
PVC camera ezinamacala ngocingo net
Lashukumisa ashiselwe wire anezikhala
PVC esinemthombo ashiselwe wire net ...
Ifindo lensimu elilukiwe elilungisiwe
Uhlobo lomkhiqizo: I-PVC camera mesh wire wire mesh
Izinto: Ikhwalithi ephezulu yensimbi yocingo oluhlanganisiwe lwensimbi, ucingo oluphansi lwe-carbon iron
Surface Ukwelashwa: PVC Camera
I-PVC enamathela i-hexagonal wire mesh islo eyaziwa njenge-chinken netting. ukwandisa impilo yenkonzo yenethiwekhi, anti-ultraviolet, anti-ukuguga kanye ne-weathering role.Ukukhethwa kwemibala ehlukene kungenza ubuhle bezindawo ezizungezile Ngokuvamile, umbala odumile uluhlaza.Pvc enamathela inkukhu wocingo ingavimbela izinkukhu ekulimaleni.
Ipulasitiki enezinhlamvu eziyisithupha ezinamacici njengohlobo lwesikrini, esetshenziswa kakhulu embonini ye-petrochemical, ukwakhiwa, i-aquaculture njalonjalo. , i-antifreeze, ukuvikela indawo yokuhlala, ukuvikela indawo.Kungasetshenziswa futhi ukukhulisa izinkukhu, amadada, onogwaja kanye nezinye izibaya zezilwane
Uhlobo lwebhizinisi: Factory & Trading Company
Imikhiqizo Main: Wire Mesh, Metal Fence
Unyaka Wokusungulwa: 2008
Isitifiketi: TUV, ISO9000
Indawo: Hebei, China (Mainland)
Usayizi anezikhala: 1 ``, 1/2 '', 5/8 ``, 3/4 '', 2 ``
I-Wire Gauge: 0.9mm ~ 2.0mm
Ubude: 5m, 10m, 25m, 30m, njll.
Izici: Ukumelana nokugqwala, ukumelana nokugqwala, ukumelana ne-oxidation, kuhlanganiswe kalula.
Amazwi: Osayizi ngaphandle kwalabo ababalulwe ngenhla mhlawumbe benziwe uku-oda ngemuva kokuqinisekiswa.
yenkukhu yezinyoni, ingadi kocingo, izingane inkundla yokudlala, Christmas imihlobiso.
Usebenzisa impilo elula yokusebenza isikhathi eside, amandla amakhulu okuvikela, londoloza izindleko zokuhamba, ukuguquguquka okuhle.
Ukupakisha & Ukuthunyelwa
I-FOB Port: iTianjin
Ukuhola Isikhathi: 15 ~ 30days
Amaphakheji: a.In rolls, esongwe ngamanzi ubufakazi iphepha noma shwabanisa ezisongiwe
c. Enye indlela yokupakisha mhlawumbe yamukelwe ngemuva kokuqinisekiswa
Indlela Yokukhokha: T / T, Advance TT, Paypal Etc.
Sigxile kulo mkhakha iminyaka eminingi futhi sinokuhlangenwe nakho okuningi ocingweni lwensimbi nocingo lwensimbi.Imikhiqizo yethu yonke yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme zezinto ezibonakalayo.Izinto ezibonakalayo ziseduze nefektri yethu.Amasampuli anikeziwe futhi ama-oda wesivivinyo amancane angamukelwa ngemuva kokuqinisekisa.Intengo yethu inengqondo.Singathanda ukugcina ikhwalithi ephezulu kuwo wonke amaklayenti avela kuwo wonke umhlaba.
Langaphambilini Lashukumisa ashiselwe wire anezikhala
Olandelayo: Lashukumisa yocingo olunezinhlangothi anezikhala Animal Fence
Lashukumisa yocingo olunezinhlangothi anezikhala Animal Fence